February 2014 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
ဖေ့စ်ဘုတ် ကာတွန်းစုစည်းမှု (၂၈-၂)
‎မြန်မာတို့ အတွက်မြန်မာ့ ဆေးမြီးတိုများ
ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် ကွန်ပျူတာလေးမှာ သူများမသိစေချင်တဲ့ အကြောင်းအရာ လေးတွေရှိလို့ Passwords နဲ့ပိတ်ထားကာမှ အချိန်ကြာလာ သောအခါ အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ နဲ့မေ့သွားတတ်ပါတယ်။ ထိုအခါကိုယ့်အတတ် နဲ့ကိုယ် ကွိုင်တက်တော့တာပါဘဲဗျာ..။ ထိုအဖြစ်မျိုးကြုံတွေ့နေရသူတွေအတွက်ကော ၊ Passwords ဖွင့်နည်း သိချင်သူတွေအတွက် နည်းလမ်းလေးများဖြစ်နိုင်သလောက် ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်..။
ဆဲမှ ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စလေးတခု ဖတ်ဘူးတယ်
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မှာ ရောင်စုံသူပုန်တွေ ၀ိုင်းနေတော့၊ ဖျာပုံလား မြို့ ကိုစီးတော့မယ်၊ ငွေတိုက်ကိုလဲ ဖေါက်တော့မယ်၊ မြို့ ကိုလဲ လုတော့မယ်
အဲဒီမှာ ဗိုလ်စိန်မှန်က (နောက်တော့ ဗိုလ်မှုးစိန်မှန် ကျဆုံး) ငွေတိုက်ကို အရင်ဖေါက်ပလိုက်တယ်၊
ပြီး အရပ်သားတွေကို ငွေ၃၀၀ ရိုင်ဖယ်တလက်၊ ကျဉ်ဆံပေးပြီးတော့ အရေးပေါ်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ ပြီး သူပုန်တွေကိုခံချတယ်။
တိုက်ပွဲကျတဲ့လူတွေကို ချက်ခြင်း မိသားစုတွေကို ထောက်ပံ့ကြေး ထုတ်ပေးတော့ ရွတ်ရွတ်ချွံချွံ တိုက်ကြတာပေါ့။
Author: lubo601 | 7:44 AM | 1 Comment |
July 5, 2012 at 2:08pm
မြန်မာပြည်မှာ ခေတ်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေကို Celebrity များထံမှ တစ်နေ့တစ်ခြား ဖော်ချွတ်ပုံဖော် ဝတ်ဆင်မှုများကို တွေ့နေရပါတယ်။ Celebrity ဆိုသည့်အတိုင်း ၎င်းတို့၏ ဖော်ချွတ်ဝတ်ဆင်ပုံများမှာလည်း အတော်ပင်ကြည့်လို့ကောင်းသည်မှာ အမှန်ဖြစ်နေပါတယ်။
Cloud Cuckoo Land shared စာပေဥယျာဉ်'s photo.
သံကို ဓားလုပ်တော့ ...
စက္ကူကို တစ်ရှူးလုပ်တော့ ...
သူ့တန်ဖိုးနဲ့ သူ ...
သူ့အသုံးဝင်မှုနဲ့ သူရှိကြတယ် ...။
လူသားတိုင်း လူသားတိုင်းမှာလည်း ...
လုပ်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်တွေ ကိုယ်ဆီရှိတယ်။
ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ်ဟာ ...
Par Gyi's status.
ယောကျာ်းလေးများသည် မည်မျှချောမောနေပါစေ ညစ်ပတ်လျှင်မကြိုက်။ သေသေသပ်သပ်နှင့် သန့်သန့်ရှင်းရှင်းရှိလျှင် သဘောကျ ကြသည်။ ဆိုလိုသည်က မည်မျှချောမောပါစေ အစားစားလျှင် ပေတလူးခါနေလျှင် မကြိုက်ကြပေ။ မည်မျှချောပါစေ ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်နေလျှင် သဘောမကျပေ။ ပါးတွင် မိတ်ကပ်မည်မျှလိမ်းလိမ်း တစ်နေ့တစ်ခါမှ ရေမချိုးတတ်လျှင် သဘောမကျ။
မနေ့ က ကားအောက်ပိုင်းလေးစစ်ဘို့ ဝပ်ရှော့ သွားပြတယ်။ နဲနဲကြာတော့ ဖုန်းအင်တာနက်လေးဖွင့်၊ ဟိုကြည့်ဒီကြည့်လုပ်ရင်းထိုင်စောင့်နေမိတယ်။
ရုံးဆင်းကာစ ရုံးကနေတန်းလာတော့ ယူနီဖောင်းကမလဲရသေးဘူးဗျ။ အဲလိုနဲ့ ထိုင်စောင့်နေရင်းမှာပဲ လူတစ်ယောက် ချိုင်းထောက်နဲ့ ကျတော့်ဆီတစ်ဖြေးဖြေးလှမ်းလာနေတာကိုသတိပြုမိတယ်။
ကျတော့်နားကိုရောက်တော့ ကျတော့်ကိုအလေးပြုတယ်။ ကျတော်လဲကြောင်ပြီး အလေးပြန်ပြုမိ ပါတယ်။ နောက်ပြီးကျတော့်ကို မ၀ံ့မရဲနဲ့ စကားပြောတယ်။
"ဗိုလ်ကြီး ကျတော် သူတောင်းစားမဟုတ်ပါဘူး "
Author: lubo601 | 7:41 AM | No မှတ်ချက် |
‪ မယားငယ် - ဟယ်လို၊ ဦး.... ရဲ့ မိန်းမပါလား
မောင့်မှာတမ်း in ၈။ဟာသလွင်ပြင်.
မလေးရှားကို ဘာဖြစ်လို့ လာချင်ရတာလဲ...
Author: lubo601 | 6:14 AM | 1 Comment |
Ko Zaw Nyi Nyi's photo.
နာခေါင်းထဲကိုစူးရှသည့် အနံများတိုးဝင်နေသည်။ လူကနွမ်းနေသဖြင့် ကိုယ်ခန္ဓာကိုဘယ်ညာ ယိမ်းလိုက်လျှင်ပင် မောပန်းခြင်းကဆက်တိုက်ဖြစ်လာသည်။ ကုတင်အောက်မှ ခင်းထားသော အ၀တ်ကြောင့် ခါးနောက်ပိုင်းက ပူလောင်နေသည်။ ပက်လက်အိပ်ပြီး အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူလိုက်လျှင် လှိုက်တက် လာသောရင်ဝမှ နာကျင်မူက မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်မသိဖြစ်နေသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ယောက် မြန်မာနိုင်ငံကို လာလည်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသား ဧည့်လမ်းညွန်တစ်ယောက်ငှားပြီး လျှောက်လည်သတဲ့။
အိမ်ပြန်လာရင်း ဘေးကနေ ဖြတ်မောင်းသွားတဲ့ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ စုံတွဲလေးတစ်တွဲကို အဝေးက လှမ်းမြင်နေခဲ့ရတယ်၊ အနားကဖြတ်မောင်းသွားတော့လည်း သေသေချာချာကြည့်လိုက်မိတယ်၊ လယ်သာဂျာကင် အနက်လေးတွေနဲ့ ဂျင်းပင်လေးတွေ ၀တ်ထားတဲ့လှပ ခေတ်မီပြီး ငယ်ရွယ်နုပျို လန်းဆန်းနေတဲ့ စုံတွဲလေးပါပဲ....
Essential Moe added2new photos.
အရာရာတို့၌ ခံပြင်းစွာ နာကျည်းစွာ
ဒေါသဖြစ်စွာ အရှုံး မမည် သော အရှုံး သံသရာ မှာ သူတို့ ကူးခတ်ဆဲ
ငွေကြေးချမ်းသာသူများ ပိုချမ်းသာပြီး ဆင်းရဲသူများ ပိုဆင်းရဲလာကြောင်း လွှတ်တော်ကော်မတီ အစီရင်ခံစာ၌ ဖော်ပြထားကြောင်း သိရှိရပါသည် ။
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ် ပထမခြောက်လအတွင်း အစိုးရ၏ တစ်နှစ်လုံး စီမံချက်များအပေါ် ၃၂ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သာ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိပကတိ အခြေအနေမှာ ငွေကြေး ချမ်းသာသူများ ပို၍ချမ်းသာလာပြီး ဆင်းရဲသူများ ပို၍ဆင်းရဲလာကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ စီမံကိန်းများနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပူးပေါင်းကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
တခါတုန်းက နိုင်ငံငယ်လေးတစ်ခုမှာ ငယ်ရွယ်ပြီး ထက်မြက်တဲ့ ဘုရင်တပါး နန်းတက်ခဲ့တယ်…… ထိုတိုင်း ပြည်ရဲ့ အနီးအနားမှာ အလွန်းအင်အားကြီးပြီး စစ်လိုလားတဲ့ ဘုရင်ကြီး တစ်ပါးရှိတယ်…..
ထို ဘုရင်ကြီး ဟာ တိုင်းပြည်ငယ်လေး ကိုသိမ်းပိုက်ချင်ပေမဲ့ ဘုရင်ငယ်လေးရဲ့ ငယ်ရွယ်မှုနဲ့ ထက်မြက်တဲ့အတွေးအ ခေါ်တွေကို သဘောကျလို့ အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးလိုက်ပါတယ်…..
တစ်နှစ်လျှင် သတို့သမီး သန်း ၂၀ ခန့်လိုအပ်နေသောနိုင်ငံသို့
ဧည့်လမ်းညွှန်များ ဧည့်လမ်းညွှန် လိုင်စင်ကတ် ချိတ်ဆွဲ ထားရန်နှင့် ပြည်ပနိုင်ငံ အလံများ လွှင့်ထူ၍ ခရီးစဉ်လှည့်လည်ခြင်း မပြုရန် သတိပေး
ooredoo မှ မိုဘိုင်းဆင်းကဒ်များကို ယခုနှစ်ဇူလိူင်လတွင် စတင်ရောင်းချ ပေးတော့မည်ဟုဆို
နွေရောက်ပြီ ဘယ်မှာလဲ ရေ…
တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်း အစိုးရနှုန်းထားအတိုင်း လျှပ်စစ်မီတာခ ရရှိရေး ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည်
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ခုနစ်သောင်းကျော် သိမ်းဆည်းထားသော မီးခံသေတ္တာ အခိုးခံရ
မော်ဒယ်မြင့်ကား ၀င်ရောက်မှုများသော်လည်း ကားပြင်မည့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် နည်းပါး
တတိယ ဘုရားသခင် - အဖေ ချောင်း
Khine Wa Thone
အဖေချောင်း ၊ ဖေချောင်း ၊ ဖေချောင်း . . .
စင်အောက် ကွင်းပြင်ထဲမှ လူထုကြီး၏ အော်ဟစ်သံကြောင့် ဆြာမာကျက်သီးဖြန်းဖြန်းထမိသည် ။ ပရိတ်သတ်ကြီးသည် သူတို့၏ ပြည်သူ့ခေါင်းဆောင်ကြီး ဦးသံချောင်း၏ အမည်ကို ဟစ်ကြွေးနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ဖခင်ကဲ့သို့ပင်အလေးအမြတ်ထားသဖြင့် အဖေချောင်း ၊ ဖေချောင်းဟုခေါ်ကြတော့သည် ။
"ကျေးညို နဲ့ ၄ စက္ကန့်"
McLaren ပြိုင်ကားအသင်းက သူတို့အသင်းရဲ့ ကားဘီးလဲတဲ့အဖွဲ့ကို သိပ်သဘောမကျဘူး။
ကားဘီးလဲတာ နှေးလို့တဲ့ပြိုင်ပွဲကျင်းပနေစဉ်မှာ ကားဘီးလဲတဲ့ အဖွဲ့ရဲ့လျင်မြန်မှုကလည်း ကားပြိုင်ပွဲရဲ့အနိုင်အရှုံးကို ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတာကိုး။
မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း) - သမုဒယဝတ်ရည် ကဗျာများ
မချိုချိုလွင်(ချယ်ရီ ဗီနိုင်း) မန္တလေးမှစာရိုက်လှူဒါန်းပါသည်
တင်ပြပေးလိုက်ရတဲ့ အကြောင်းကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို တရားမ၀င်လမ်းကြောင်းများမှ ၀င်ရောက် လာနိုင်ပြီး မသိနားမလည်သူ အမျိုးကောင်းသမီးလေးများကို အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ။
အမျိုးသား တစ်ဦးပေါ့။ သူ့ဇနီးဖြစ်သူထံ ဖုန်း မတ်ဆေ့ခ်ျပို့ပါတယ်။
"ခင်ရေ။ အဝတ်တွေအားလုံး ဒီည အပြီးလျှော်ပါ။ ညစာ ကြက်သားဟင်း ချက်ပါ။ ပြန်တာ နည်းနည်းနောက်ကျမယ်။ နက်ဖန် အတွက် အဝတ်ကို မီးပူ တိုက်ထားပေးပါ"
3. administrator အုပ်ချုပ်ရေးမူး
5.director of education ပညာမင်းကြီး
မိန်းမကောင်း မိန်းမမြတ်၏ အဆင်းလက္ခဏာများ
Kyar Phyu Nwe shared ပျိုမေတို့သိစေဖို့'s photo.
၁။ နူးညံ့သော အသားအရေရှိသည်။
၂။ မည်းနက်သော ကော့ညွတ်ရှည်လျားသည့် ဆံပင်ရှိသည်။
၃။ ရွဲ၍ ကြည်လင်သော မျက်လုံးရှိသည်။
ရှင်ရာဟုလာ နှင့် အုန်းမှုတ်ခွက် ဒေသနာ
အမ္ဗလဋ္ဌိက ရာဟုလောဝါဒသုတ်မှာ မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ ဇာတ်တော်လေး ဖြစ်ပါတယ်၊ ရှင်ရာဟုလာလေးကို မြတ်စွာဘုရား ဆုံးမတော်မူတဲ့ ဇာတ်တော်လေးပါ၊ ရာဟုလာလေးဟာ သူမွေးတဲ့ နေ့မှာပဲ ဘုရားအလောင်းတော် တောထွက်တဲ့အတွက် ဖခင်ကို မမြင်ဖူးရှာပါဘူး၊ သူ့ဖခင်ကို ပထမဦးဆုံးတွေ့ ခွင့်ရတဲ့ အချိန်မှာတော့ သူဟာ အသက် (၇) နှစ်သား အရွယ်ဖြစ်နေပါပြီ၊
ဒီစကားက ကြမ်းတမ်းချင် ကြမ်းတမ်းလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ တွေးရုံလေးပဲ တွေးကြည့်လိုက်ပါ။ သင်အသက်ရှင်နေသမျှ သင်ဟာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါတယ်။
ကင်းဝန်မင်းကြီး ဦးကောင်းဆိုတာ ...
သမီးလေးသို့ သမိုင်းဖတ်စာ (၁)
*** တရားဘယ်မှာရှာ ***
~လူပျံတော်ပတ္တမြား ဦးမောင်မောင် ~
ဆွေမျိုးသားချင်းများနဲ့ပတ်သက်သော အင်္ဂလိပ် အခေါ်အဝေါ်များ
ချန်နရာရဲ့ အကောင်းဆုံး အတွေးအခေါ် (၁၅) ခု
အမိအဖကို ပြုစုသူကို သူတော်ကောင်းတို့ ချီးမွန်းဧ။်
ဆူဒန်နိုင်ငံက ဆိတ်နှင့် တရားဝင်လက်ထက်ရသူ
အာဏာ ၊ ခွာနာ ၊ လျှာနာ . . .
"ဆိုဒ်ထဲ ဗုံးခွဲတဲ့ မြန်မာ"
သင့်ရဲ့ဘဝကို သင်ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ ဘဝပေတံဖြင့် တိုင်...
ကဗျာ ဆရာရဲ့ ဘဲဥချဉ်ရည်
ရံဖန်ရံခါ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတတ်တဲ့ ဆီးလမ်းကြောင်းမှာ ...
နေ့စဉ်သုံး လျှပ်တစ်ပြက် အင်္ဂလိပ်ဝါကျများ
“ အသက်ကို ဥာဏ်စောင့်၏ ”
ဟော်မုန်းများနှင့် မိန်းမသား …..
သင်မသိတဲ့၊ မတွေးမိတဲ့ အချက် ၁၀ ချက်
အမျိုးသမီးများ သုံးနေကျ စကား ၉ ခွန်း.....
ဘာသာတရားနှင့် ပတ်သက်သည့် ဝေါဟာရများ
* Knowledge Management ဆိုတာဘာပါလဲ*
ဘီဘီစီရဲ့ Asia Beats ပေါ်က သားစိုး
တုံးအ တဲ့ ယောက်ျားနဲ့ ထက်မြက်တဲ့ယောက်ျား
~ကျမ္မာတဲ့ ဆံပင်ဖြစ်စေဖို့ ~